Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga laga guddoomay - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)– Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, mudane Axmed Ciise Cawad, ayaa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirka cusub ee dalka Turkiga u fadhin doona Soomaaliya mudane Mehmet Yilmaz.
Wasiir Cawad ayaa u rajeeyay safiirka cusub inuu ku guuleysto howsha loo igmaday, bogaadiyayna xiriirka taariikhiga ee uu dhexeeya laba dal ee walaalaha ah.
Waxa uu carabaabay sida uu u tixgelinayo dadaalka Ankara ee lagu xoojinayo xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Dhankiisa, Danjire Mehmet Yilmaz ayaa carrabka ku adkeeyay in uu ka shaqeyn doono danaha labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah si loo xoojiyo, loona horumariyo xiriirka laba geesoodka ah.
Safiir Mehmet Yilmaz ayaa bedeli doona Olgan Bekar oo ah danjirihii hore ee Turkiga u fadhin jiray Soomaaliya oo uu dhawaan muddo xileedkiisii dhamaaday.
Bartamihii bishii hore ayay ahayd kolkii wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, mudane Cabdulqaadir Axmed-kheyr uu munaasabad sagootin ah u sameeyay safiirkii hore ee Turkiga mudane Bekar.
Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyay xiriir wanaagsan oo saaxiibtinnimo la lahayd dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyada oo dalka gudihiisana ka fulisay mashaariic waaweyn oo ay ka mid yhiin tababar ciidan, hirgalinta goobo loogu adeego dadweynaha, iyo howlo samafal oo baaxad leh.
2011-kii ayay ahayd markii gurmad ay soo dirtay dowladda Turkiga ay soo gaartay Soomaaliya oo xilligaa la daalaa dhaceysay macaluul adag oo ka dhalatay abaaro is daba joog ahaa oo dalka ku dhuftatay.
Odayaal matalaayay Soomaalida iyo Booranta oo heshiis nabadeed gaaray